Doorashada Cinwaanka Cilmi Baarist (Title Selection)
Sanad waliba waxaa la dabacaa kumanaan cilmi baaris ah. Cilmi baare walibane waxaa uu tartan xoogan ugu jiraa sidii cilmi baaristiisu oo ay noqonlahayd mida loogu aqriska iyo xigashada badan yahay. Hadaba cinwaanku waxaa uu qayb wayn ka qataa suuq gaynta (marketing) cilmi baarista. Waxaa dhacdo mararka qaar in qoraagu uu ku guul dareesto in uu doorto cinwaanki ku habonaa cilmi baaristiisa. Hadii taasi ay dhacdo waxaay saameyn ku yeelataa tirada dadka aqrisanayo cilmi baarista, sidoo kale waxaa yarado dadk soo xiganaayo.
Cinwaanka wanaagsani waa inuu ku dhiiragaliyaa aqristaha in uu aqriyo waxa ku qoran gudaha. Dadka wax qora waqti badan iyo taxadar dheeri ah ayay ku bixiyaan cinwaanka. Waxaa jiro sadex nuuc oo inta badan loo qoro cinwaanka, waxayna kala yihiin cinwaan wax qeexayo (descriptive) waxaa uu tilmamaa maadada cilmi baarista mana muujiyo waxa natiijo ah. Nuuca labaad waxbuu cadeyaa (declarative) waxaana ka muuqda erayo sharaxayo natijada cilmi baarista. Midka sadaxaad waxaa uu uqoranyahay qaab su,aal waydiin ah (question).
Marka laga soo tago sadaxdaas nuuc waxaa jiro karo cinwaano ka kooban labo qaybood. Tusaale ahaan cinwaanka waxaa u kubilbanaa su’aal gaab kadib waxaa racaayo ficil sameeyaha jumlada (subject sentence). Waxaa kaloo jiro karo cinwaano kubilaawdo magac kadib ay raacaan labo dibcood (colon) iyo jumlad wax cadaynayso (declarative sentence) si kastaba ha ahaatee waxaa ugu mihiimsan sadaxdi aan kor ku soo sheegnay.
Marka la eego sadaxda nuuc, waxaa la bogaadiyaa oo la dhiiragaliyaa in cinwaanka uu ahaado nuuca looyaqaan (declarative) maxaa yeelay xog badan ayuu xambaarsan yahay oo markiiba aqristaha soo jiidan karo. Daarasad ay sameeyeen Jamali iyo Nikzad (2011) waxay ku ogadeen cinwaanda leh calaamatu su,aalka ama wata labo dhibcood (colon) in aysan helin xigasho badan. Dhinacakale daraasad uu sameyay Dalmeet Singh Chawla (2015) waxaa uu ku ogaaday cinwaanada gaaban in ay ka aqris iyo xigasho badan yihiin cinwaanda dhaadheer. Waxaase in la xasuusto mudan in cilmi baaris kasto ay san cinwaankeda ku haboneen (declarative). Sidoo kale cinwaankasto lama gaabin karo. Nuuca cinwanka uu noqonaayo waxay ku xirantahay nuuca cilmi baarista iyo mowduca la baaraayo.
Guud ahaan in la fahmo qaabdhismeedka cinwaanka waa muhiim. Dadka ku xeldheer cilmi baarista waxay ka egaan cinwaanka doorsomayaasha kala ah (dependent variable) iyo (independent variable). Doorsoomayaasha waxaan uga hadli donaa casharada danbe insha allah.
Dhinaca kale, ardayga laga rabo in uu qoro buuga qalin jabinta, waxaa uu haystaa waqti kooban, waxaana laga yabaa in uusan haysanin qarash ku filan. Waxaa haboon in uu cinwaanka uu aad usoo koobo intii suurta gal ah. Dooro cinwaan aad shaqadiisa ku dhamayn karto waqtiga kooban ee aad haysato. Muhiim ma ahan in aad xal uwada keento dhibaatada aduunka ka jirto oo dhan ee waxaa muhiim ah in aad inyar oo koban aad ku tabarucdo adigane aad ka qalin jabiso. Hadii aad ku adkaysato in aad cinwaan wayn qaadato ogow adigane ma qalin jabinaysid oo waqti waa kugu dhamanaa aduunyadina horay ayay usii soconee.
Ugu danbeeyntii, waxaa dhacda mararka qaar in marka ugu danbayo ee aad daafacanayso cilmibaarista la soo jediyo in ciwanka waxa laga badalo. Hadii ay taasi dhacdo waxba ha ka murugoon hadafki waa sidii lakin waxaa la badalaa eraybixinta (siiqada) ciwaanka uu u qoran yahay oo kaliya.
Lasoco casharo kale oo xiiso leh isbuucyada soo socdo Insha allah
Dr. Shaafici Sharif Mohamed